Kooxda RB Leipzig Ayaa Ka Badisay Kooxda Tottenham Tartanka Champions League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Timo Werner ayaa siiyay RB Leipzig hogaamiyeyaal aad uqurux badan oo ay mudan yihiin lugta hore ee wareega 16ka Champions League ee ay la leeyihiin Tottenham iyadoo kooxda reer Jarmal ay qaab ciyaareedkii London soo bandhigeen.
Hogaamiyaasha horyaalka Bundesliga ayaa iska Khasaariyay fursad ka dib fursado, oo ay ku jiraan seddex fursadood oo waa weyn 90kii ilbiriqsi, ka hor inta uusan rigoore Werner – goolkiisii ​​26aad ee xilli ciyaareedka – horaantii qeybtii labaad ayaa u keenay guul 1-0.
Waxaa dhaawac ku maqnaa Harry Kane iyo Son Heung-min, Tottenham ayaa qaniinyo yar ka heshay weerarka, iyadoo Lucas Moura uusan ku fiicneyn booska dhexe, laakiin waxa ay leeyihiin qurux badan Giovani Lo Celso kaasoo labo jeer u dhawaaday inuu helo barbaro goolal ah. wuu faarujiyay ciidamadii.
Rajada Tottenham ee ah inay mar kale u gudubto finalka Champions League ayaa mugdi galay, laakiin Jose Mourinho waa inuu ogaadaa inay kooxdiisu si hufan uga soo bixi laheyd wareega 16ka ka hor kulanka lugta labaad ee 10ka March.
Patrick Schick ayaa toogtay bannaanka xerada ganaaxa, Angelino ayaa darbadiisii ​​ka leexday darbo adag oo dhinaca bidix ah, Werner ayaana ku qasbay inuu fursad fiican ka helo daqiiqadii ugu horeysay iyo badh bilowgiisii ​​fiicnaa ee ka yimid Leipzig.
Dhanka kale, Peter Gulacsi waa inuu fidiyo si uu uga leexdo kubad ka timid Steven Bergwijn kaasoo ku sii jeeday geeska midigta hoose.
Schick ayaa markaas madax cag aan ka badneyn cagtire ka ahaa sida Tottenham, iyadoo difaaceeda ay aheyd mid kacsan, mar kale ayaa la hareereeyay. Xusuustii ayaa soo laabatay ka dib kulankoodii ugu dambeeyey ee ay koox Jarmal ah ku garaacday Tottenham Hotspur Stadium, 7-2 oo ay ka adkaatay Bayern Munich bishii October.
Werner ayaa helay fursad qaali ah daqiiqadii 35aad ka dib markii lagu leexsaday bidix ee goolka, laakiin xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa si toos ah ugu barbareeyay Lloris.
Leipzig ayaa ugu danbeyntii helay fursad ay hubaal tahay inaysan kudhaceyn daqiiqadii 56aad markii Ben Davies uu jebiyey Konrad Laimer, markan waxa uu Werner garaacday Lloris, oo rigooradiisa cajiibka aheyd uu helay geeska bidix.
Tottenham ayaa ku dhawaatay inay hesho goolka barbaraha, Gulasci ayaa si fiican u xajistay si uu u ilaaliyo goolhayaha Lo Celso, ka hor inta uusan Schick fursad fiican xitaa u helin ka dib markii uu 2-0 uga dhigay Leipzig.
Gulasci ayaa sameeyay meel kale oo fiican si uu u ilaaliyo laadadka xorta ah ee Lo Celso, kaasoo ahaa xiddigii Tottenham ugu cajiibsanaa meel fog, ka hor inta uusan Lucas madax banaaneyn.
Kooxda Premier League-ga ayaa heshay wixii ay u qalantay inkastoo. Habeenki markii uu noqday tababarihii ugu yaraa ee abid hogaamiye koox ciyaar ka tirsan wareega 16ka Champions League, isagoo jira da’da 32 sano iyo 211 maalmood, Tababaraha Leipzig Julen Nagelsmann wuxuu arkay naftiisa inay isbadal weyn ku sameynayaan horumarka.